पशुपतिनाथ मन्दिरबाट कामदेवको पुरानो मूर्ति चोरी — esagarmatha.com
पशुपतिनाथ मन्दिरबाट कामदेवको पुरानो मूर्ति चोरी
ईसगरमाथा संवाददाता काठमान्डौ, २२ साउन
काठमान्डौ, २२ साउन
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट पुरातात्विक महत्वको कामदेव भगवानको मूर्ति चोरी भएको छ । तीन सय वर्ष पुरानो सो मूर्ति मन्दिर परिसरको पाटी नं २० बाट चोरी भएको हो । उक्त मूर्ति गत चैतसम्म सुरक्षित थियो ।
पाटीसँग साँध जोडिएका घरधनी सन्तोष शर्माले गत चैतमा मूर्ति जडान गरिएको पर्खाल भत्काएका थिए । सो ठाउँमा शर्माले अहिले निजी कार पार्किङ गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गा पनि सार्वजनिक रहेको र पर्खालको मूर्ति त्यहीवेलाबाट बेपत्ता भएको स्थानीयले बताए ।
तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर पञ्चायतले प्रकाशन गरेको इन्भेन्ट्रीमा समेटिएको तथ्यांकले पनि पाटी नं. २० मा लगाइएको पर्खालमा कामदेवको मूर्ति जडान गरिएको प्रष्ट देखाउँछ । सो पर्खाल ०४४ मा तत्कालीन नगर पञ्चायतले बनाएको थियो । अहिले उक्त जग्गा सुशीला पुडासैनी शर्माको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । सुशीला सन्तोषकी आमा हुन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गंभीर ध्यान आकर्षण भएको कार्यकारी निर्देशक डा.घनश्याम खतिवडाले बताए । पाटी नं. २० मा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको र त्यहाँ राखिएको मूर्ति पनि गायब भएको भएको बताएकाछन् । सो जग्गा तलमाथि भएको सूचना हामीले पनि पाएका छौँ । त्यहाँ १८औँ शताब्दीमा स्थापना भएको कामदेवको मूर्ति पनि गायब भएको सूचना आएको छ  । आवश्यक अनुसन्धान जारी छ,’ खतिवडाले भने ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार गत शिवरात्रिमा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेशद्वार नजिकैबाट धर्मचक्रको मूर्ति हराएको थियो । मन्दिर खोजीका लागि कोषले आवश्यक पहल गरेको छ । तर, अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन । उक्त मूर्ति पनि निकै पुरानो भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले त्यहाकोे सार्वजनिक जग्गा मिचिएको र पर्खालमा जडान गरी राखिएको कामदेवको मूर्ति गायव बताए । ‘पर्खालमा कामदेवको निकै पुरानो मूर्ति थियो । पर्खाल भत्काएपछि त्यहाँ राखिएको मूर्ति एकाएक हरायो । पर्खाल लगाउनुअघि त्यहाँ सार्वजनिक पाटी थियो । पाटीमा बसेर नेवार समुदायले भजन गाउँथे । अहिले पाटी पनि छैन, मूर्ति पनि छैन,’ उनले भने ।